Kiiska Kiiboodhka ee Warshadda looxa | Kiiska Kiiboodhka Shiinaha ee Soosaarayaasha Kiniiniga, Alaab-qeybiyeyaasha
Universal folio case oo leh kumbuyuutareedka laga saari karo ee loo yaqaan '9.7-11 inch Apple, Andriod, Windows tablets
LAGU QAADI KARO INTA BADAN 9.7 - 11 INCH TABLETS 4-Point xajin ayaa haya inta badan 9.7-11 inji oo si ammaan ah oo xarrago leh oo ay ku jiraan iPad, Android iyo Windows kiniinno. Universal Folio sidoo kale waxay soo bandhigtaa aalado badan oo lagu sheekaysto. HADA TABABARKAAGU WUXUU U SAMEEYI KARAA SIDII LAPTOP KU raaxayso saacado raaxo leh, makiinad dabacsan oo ku mahadsan furayaasha qaabka sissor iyo jajabyo tayo sare leh, sidaa darteed gacmahaagu ma dareemayaan daal. Safarka muhiimka ah ee 2 mm wuxuu bixiyaa qoto dheerida ugu fiican ee xawaaraha iyo raaxada. Shaqada loo qoondeeyay iyo furayaasha toobiyeyaasha ee iOS, Andr ...
Qalabka kumbuyuutarka ee lagu rakibo ipad Air 4 pro 11 ee Samsung tab S7 S6 lite
Runtii waad jeclaan doontaa inaad ku dhufato xaaladdan Kiiska kumbuyuutarka wuxuu isku daraa trackpad sax ah oo leh kumbuyuutar cabbirkiisu dhan yahay oo iPad-kaaga ah. Taageerada tilmaanta taabashada oo buuxa waxay u beddeleysaa iPad-kaaga mashiin wax soo saar leh oo loogu talagalay ka shaqeynta waraaqaha iyo dukumiintiyada, qalab waxbarasho oo adag oo loogu talagalay fasalo fog, iyo inbadan - fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn. QIIMEYNTA WANAAGSAN Ku shaqee saxsanaanta trackpad ee barnaamijyada sida qoraalada, bogagga, miiska lambarada iyo nuxurka. Waxaad awoodi doontaa inaad iftiimiso unugyada waraaqaha, nuqul ereyada, ...
kiiska oo leh kumbuyuutareedka laga saari karo ee loo yaqaan 'Lenovo tab M10 Plus For Ipad for Samsung tablet'
HADA TABABARKAAGU WUXUU U SAMEEYI KARAA SIDII LAPTOP KU raaxayso saacado raaxo leh, makiinad dabacsan oo ku mahadsan furayaasha qaabka sissor iyo jajabyo tayo sare leh, sidaa darteed gacmahaagu ma dareemayaan daal. Safarka muhiimka ah ee 2 mm wuxuu bixiyaa qoto dheerida ugu fiican ee xawaaraha iyo raaxada. SAHLAN SI XAFIISKA IYO NOOCA Shaqada loo qoondeeyey iyo furayaasha tuuryo badan ee iOS, Android ama Windows ha kuu oggolaadaan inaad xakameyso kaniiniga adigoon ka tagin kumbuyuutarka NOOCA KU SAABSAN BARNAAMIJKAAGA AMA LAFKAAGA AMA DUKAANKA CAFE Si fudud u fur kiiska oo bilow qoritaanka. Kiniinigaagu wuu xiran yahay ...